यस्ता छन् हस्तमैथुनका फाइदा - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडाैं । यस्ता छन् हस्तमैथुनका फाइदाहरु” data-description=”माघ १ । हस्तमैथुन अर्थात सेक्स जीवनसँग जोडिएका कुनै पनि कुराहरु गर्न लजाउने समाज छ । जो कोही पनि खुलेर यससम्बन्धी बोल्च रुचाउँदैनन् । हस्तमैथुन गर्नु सामाजिक रुपले अनैतिक हो भन्नेसम्म पनि गरिन्छ । कतिले त हस्तमैथुन गर्नाले श्रीमान्–श्रीमतीबीचको सम्बन्धमा…”
माघ १ । हस्तमैथुन अर्थात सेक्स जीवनसँग जोडिएका कुनै पनि कुराहरु गर्न लजाउने समाज छ । जो कोही पनि खुलेर यससम्बन्धी बोल्च रुचाउँदैनन् । हस्तमैथुन गर्नु सामाजिक रुपले अनैतिक हो भन्नेसम्म पनि गरिन्छ । कतिले त हस्तमैथुन गर्नाले श्रीमान्–श्रीमतीबीचको सम्बन्धमा पनि दरार उत्पन्न हुन्छ भन्छन् । तर विशेषज्ञहरु भने हस्तमैथुन स्वास्थ सेक्ससँग जोडिएको बताउँछन् । हात वा अन्य कुनै पनि कुराबाट यौन आनन्द लिने तरिका भएकाले हस्तमैथुन पुरुष वा महिलाको स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ ।
याे पनि पढ्नुस हस्तमैथुन के हो ? को अगाडि केटा की केटी ? यसले अत्यधिक असर गर्छ ?
याे पनि पढ्नुस पुरुषले धेरै हस्तमैथुन गर्ने नयाँ तथ्य सार्वजनिक
याे पनि पढ्नुस हस्तमैथुन गर्दाका फाइदा के-के ? हेर्नुस्